जापानको थोक बजार संकुचन - होराइजनमा वैश्विक समाधान? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अक्टोबर 16, 2020 डिसेम्बर 16, 2020 थोक र B2B समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक - B2B, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि यो गिरावट "ज्यादातर वस्तु र जापानी मेसिनरी सामानको नरम विश्वव्यापी मागका कारण" भएको देखिन्छ र यसले जापानलाई पछाडि धकेल्न सक्छ।
बढ्दो समस्या उदाउँदो सूर्यको भूमिमा क्षितिजमा देखा पर्दछ, COVID-१ of को दोस्रो छालको डरले उपभोगलाई तौल गर्न सक्छ। महामारीको पीडा विश्वव्यापी रूपमा महसुस भएको छ, र विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था यसको अपवाद छैन।
थोक बिक्रेता, खुद्रा विक्रेता, र उपभोक्ता एकै किसिमले चुनौतिहरूको नयाँ र बढ्दो सेटले प्रभाव पारेको छ: उनीहरूको माग राख्नेहरूलाई उनीहरूको उत्पादनहरू दिने, ती उत्पादनहरूको लागि नयाँ बजार र उपभोक्ताहरू फेला पार्ने, र अपरेशनको सबै पक्षहरूमा लागत कटौती गर्ने।
राम्रो समाचार यो हो कि आवश्यकता, अवश्य पनि, प्रायः आविष्कारको आमा हुन्। भेला ग्लोब किन्नुहोस्, एक नयाँ ग्लोबल अनलाइन थोक बजार। शप द ग्लोबले विश्वव्यापी स्टोरफ्रन्टमा क्यानाडादेखि टर्कीदेखि भानुआटुसम्म विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ। द ग्लोब पनि संचालन गर्दछ १०० भन्दा बढी प्रमुख भाषाहरू- जापानीज सहित र येन प्रदान गर्दछ मुद्राको एक विस्तृत विविधता। प्रत्येक अधिक को बाटो मा छन्।
ग्लोब शप गर्नुहोस्, थोक व्यापारीहरूलाई महँगो र अक्सर अनावश्यक बिचौलिया हटाएर यी कठिन समयमा लागत घटाउँदछ। यसले ग्लोब शपलाई विक्रेताहरूलाई चार्ज गर्न दिन्छ जुन उनीहरूले बेच्दछन् केवल १२% लाई। विक्रेताहरु लिस्टिंग र समाचार प्रकाशन पोष्ट गर्न सक्दछ शप द ग्लोबमा कुनै अगाडि, जेब लागतको बाहिर। न्यूनतम सेटअप समयको साथ, थोक बिक्रेताहरू उठ्न र छिटो द ग्लोबमा द्रुत रूपमा चाँडो गर्न सक्षम छन्।
ग्लोब शप ग्लोबल समाचार कम्पनीको स्वामित्वमा छ, सांप्रदायिक समाचार, र साइटहरूको नेटवर्कको अंश हो जुन द्रुत बृद्धि प्रदर्शन गर्दछ। यो हाम्रो तेस्रो साइटको साथ हो फ्रीलान्स ग्लोबल गिग तीनै जनाले हाम्रा विक्रेताको लागि कुनै वा एकदम कम लागतमा विश्वव्यापी प्लेटफर्म स्थापना गरेका छन्।
जो कोहीले हाम्रो लक्षित लेखहरू साम्प्रदायिक समाचार, गुगल समाचार वा फेसबुक समाचारहरूमा पढ्न सक्दछन्। सांप्रदायिक समाचार पनि बजार मा गहिरो आँखा संग समाचार, व्यापार, खेल, र विश्लेषण प्रदान गर्दछ। सांप्रदायिक समाचार दैनिक, अप-टु-डेट-रिपोर्ट र उत्पादन र सेवाहरू, बजार र उद्योगहरूको बिभिन्न विविधतामा पूर्वानुमान गर्दछ। हाम्रो साइट को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
सामान्य समयमा पनि, व्यापार या त नया हुन्छ वा वनस्पति। महामारीको स्थिरता (वा लpp्गडो) घरेलू मागको साथ, धेरै थोक बिक्रेताहरूले नयाँ उपभोक्ताहरूलाई भेट्न विश्वव्यापी जानु पर्छ। यो गर्नका लागि एक नयाँ र नवीन तरीका भनेको ग्लोब शपबाट हो। आजै प्रयास गर्नुहोस्! ग्लोबको ग्लोबल थोक विक्रेता दर्ता खरीद गर्नुहोस् नि: शुल्क छ।
सांप्रदायिक समाचार जापानी थोक बिक्रेता ग्लोब किन्नुहोस् थोक
एक स्वस्थ, जीवनभर सम्बन्ध कायम राख्न उपहारको Qu क्विन्टेन्सेन्टल भूमिका
बेलारूस - टिखानोव्स्कायाले लुकाशेन्को म्याद राजीनामा गर्न अन्तिम मिति दिन्छ